China Rubber Roller CNC Fitotoana Vary masinina sy mpanamboatra | fahefana
1. Rafitra fiasan'ny CNC
2. Fahaiza-mitoto, manetsaha ary manapaka fahaiza-manao feno
3. Sariaka amin'ny tontolo iainana
4. Fahombiazana avo
5. Fandidiana mora
6. Safidy feno ho an'ny fiarovana azo safidiana
7. CE fanamarinana azo omena
1. Rafitra miasa miasa ho an'ny mpampiasa CNa mahomby.
2. Ny rafitra farany indrindra dia afaka miasa am-pahamendrehana ny drafitra fanodinana 35 amin'ny velaran-tsarimihetsika vita amin'ny fingotra, izay misy ny fanapahana, ny fikosoham-bary, ny fanetsiketsehana ary ny fitambarana.
3. Fisafidianana asa fitifirana olana an-tserasera lavitra no azo fidina.
4. Ny mason-tsivana mitodika amin'ny loha mitodika dia azo fidina.
5. Manana ny asany rehetra ao amin'ny milina fitotoam-bolo ankapobeny PSM toy izao manaraka izao.
1) Fitaovana mahazatra an'ny andian-dahatsoratra PSM dia misy:
2) Natao manokana hanoloana ny fomba fizotran'ny fikosoham-bary mahazatra.
3) latabatra kalesy roa antonony niangona mba hiantohana ny fahombiazan'ny asa sy ny fahamarinan-toerana.
4) Ny max. hafainganam-pandehan'ny lohan'ny fikolokoloana mihoatra ny 90m / s. Ny fahombiazan'ny famokarana dia nitombo ary ny haben'ny geometrika dia azo antoka.
5) Fitaovana fandrefesana maoderina voaangona ara-potoana dia manamarina ireo angon-drakitra fanodinana ary manome fanampiana mahomby amin'ny fifehezana ny haben'ny fikosoham-bary azo havaozina rehefa angatahina.
6) Mahavita mahatsapa fanitarana ny fanodinana ny roller fingotra miendrika manokana.
Laharana maodely PSM-4020-CNC PSM-8040-CNC PSM-1260-CNC PSM-1680-CNC
Hery (KW) 17 22 26 32
lafiny 4m * 1.6m * 1.4m 6.5m * 1.8m * 1.6m 8.0m * 2.0m * 1.8m 11m * 2.4m * 1.8m
CNC na tsia CNC CNC CNC CNC
Kodiarana mitsimoka firaka firaka firaka firaka
Multi-asa Fitotoana, fikolokoloana & fanapahana
Ny rafitra dia manana fikirakira fanodinana feno manodidina, miaraka amin'ny drafitra fanodinana 35:
Izy io dia manana karazany 5 ny fanapahana endrika, ny karazana fikosoham-bary miendrika horonam-bokatra (Fitotoana Vary, ny fitotoana Convexity afovoany, ny fikolokoloana satroboninahitra afovoany, ny fitotoana ny lohany, ny fikolokoloana ny onjampeo), ary ny karazana fiasa 25 amin'ny fanodinana ireo lalan-kely 5 (Grozy mitsangana , Làlan-drivotra, lalan-drivotra Rhombus, fantsom-bolan'ny olona ary havoara ambaratonga) amin'ny karazany 5 amin'ny endrika roller.
Mifototra amin'ny milina fitotoana milina fitetezana PSM ankapobeny, ny andiany PSM-CNC dia novolavolain'ny fanovana ny karazana fiara sy ny rafitra fanaraha-maso. Ny rafitra CNC dia lozisialy voafehy nomerika voafehy ho an'ny fanodinana horonan-taratasy. Jinan Power Rubber Roller Equipment Company sy ny andrim-pikarohana fikarohana siantifika mampivelatra ny rindrambaiko. Ny toetra mampiavaka azy amin'ny asa matihanina no tsara indrindra eo amin'ny indostrian'ny milina. Noho ny fihodinan'ny rafitra rehetra dia afaka manamboatra saika ny mombamomba ny rojo rehetra izy io. Ohatra, satro-boninahitra parabolic sy concave, satroboninahitry ny cosine sy concave, boribory, cone, pitch madity, herringbone, diamondra, groove mahitsy, groove marindrano sy formations hafa.
1. Azo safidiana ny serivisy fametrahana eo amin'ny toerana.
Teo aloha: Rubber Roller General Fitotoana Vary Machine
Manaraka: Rubber Roller CNC High Precision Cylindrical Fitotoana Vary Machine
Rubber Roller Cnc Surface Machine Fitotoana Vary
Autoclave- Karazana fanafanana herinaratra
Mill-mampiasa fingotra fampifangaroana fingotra (Double Output)
Rubber Roller Alloy Fitotoana Vary Device